China dropout Cutout High voltaji onyinye fuuz Manufacturer na Supplier | Mere
Dropout fuuz nwere ihe insulator na-akwado yana fuse tube. Static kọntaktị ofu n'akụkụ abụọ nke insulator nkwado na-akpụ akpụ kọntaktị arụnyere na nsọtụ abụọ nke fuuz tube. Fuuz tube mejupụtara n'ime aak-anyụ tube, ná mpụga phenolic onyinye akwụkwọ tube ma ọ bụ epoxy iko tube.To jikọọ na-abata feeder nke nkesa edoghi ya tumadi echebe transformer ma ọ bụ edoghi si obere circuit na bufee, na on / anya loading ugbu a.
Poselin dropout fuuz
Nabata ịkpọtụrụ anyị na nkọwa ndị ọzọ. Enwere ike ịnye nkọwa ụfọdụ dị ka ihe ndị ahịa chọrọ.
1.dobe nchedo ugbu a.
2.model na kọmpat imewe.
3.high ike ike.
Ọnọdụ Gburugburu Ebe Ọrụ
1.Normal ọrụ ọnọdụ: ihere okpomọkụ adịghị elu +40 ogo, ọ bụghị ala karịa -40 ogo;
Altitude nke akarighi 1000m;
Oke ikuku ikuku kariri 35m / s;
Ala ọma jijiji ahụ adịghị ike karịa nrịgo 8.
Ngwaahịa anaghị adabara ebe ndị a:
Ebe ndị nọ n'ihe egwu nke ịgba ọkụ ma ọ bụ ịgbawa;
Ebe mmegharị ma ọ bụ mmetụta ike;
Electric conduction, chemical gas edinam na oké mmetọ nnu alụlụ ebe.
Fuuz Cutout na Poselin Isi na-eji iji chebe nkesa na ndị na-agbanwe nkedo megide mbibi na mkpụmkpụ mkpụmkpụ. O nwekwara ike ịbụ ngbanwe nkwụsị njikọ na iji ngwa ọrụ nkwụsịtụ ebugharị. Emepụtara fuuz ahụ ka ọ dabara n'ọnọdụ ọrụ na ngwa ọ bụla ma ọ gafere ụdị ule nke ụlọ nyocha KEMA.
.Dị Gosiri voltaji
(KV) Gosiri na ugbu a
(A) Circuit emebi
ikike 3-adọ (MVA) Na-achọ max
ugbu a (KA) N'ime voltaji mba
(H) RWX10-35 / 0,5 35 0,5 2000 28 Karịa oge 2,5
arụ ọrụ voltaji
(H) RWX10-35 / 3 35 3 2000 28 Karịa oge 2,5
(H) RWX10-35 / 5 35 5 2000 28 Karịa oge 2,5
Nke gara aga: Hot ire okpomọkụ Ada Ada USB nchupu
Osote: N'ogbe Chinese Product mejupụtara Cross Ogwe aka Insulator